Malware rosiana hita ao amin'ny orinasam-pahefana amerikana | Vaovao momba ny gadget
Malware rosiana hita ao amin'ny orinasam-pahefana amerikana
Ny fifandirana misy eo amin'i Etazonia sy i Russia dia mijanona ho matanjaka hatrany, na dia tsy mivantana aza. Ary ny manampahefana mahefa any Etazonia no nanomboka fanadihadiana momba ny fanodikodinam-bola ny firenena amerikana avaratra nataon'ny hacker rosiana, izay niafara tamin'ny sazy omaly nipoitra mivantana avy amin'ny filoham-pirenena, Barak Obama. Androany dia miverina amin'ny afo indray ny solika, ary hitan'izy ireo ny malware rosiana amin'ny solo-sain'ny orinasan-jiro amerikana, izay niteraka fihetsika isan-karazany. Hianarantsika bebe kokoa momba ny zavatra misy ny malware hita sy ny antony mety hametrahany maso an'i Etazonia.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra, ny malware hita dia mifandray mivantana amin'ny vondron'ireo mpijirika izay notanisain'ny FBI sy ny departemantan'ny Security Homeland ho antony nanodinkodinana ny fifidianana. Nantsoina hoe Steppe mahafinaritra, ary mampatahotra ny Amerikanina matanjaka izy ireo.
Ny departemanta elektrika Burlington no nitatitra ny fisian'ity malware ity tsy misy hafa fa ao amin'ny pejiny Facebook. Ny tahotra dia tsy mijanona mitombo isaky ny misy karazana fampahalalana an'ity karazana ity miseho, indrindra raha ampifandraisina amin'ny zavatra manan-danja toy ny orinasa herinaratra izy io, tena ilaina amin'ny fiasan'ny fiarahamonina ankehitriny.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra any an-toerana dia tsy atahorana ny rafitra, efa hita ireo rindrambaiko voan'ny virus ary nandray andraikitra araka izany izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny FBI sy ireo sampana mifandraika amin'izany dia manohy ny ady mahery vaika manohitra ny "fitsikilovana cyber", ary hafahafa ihany, I Russia dia hazakazaka mialoha an'i Etazonia amin'ity, iza no nieritreritra an'izany? Toa tsy te-hanome hevitra momba izany ny filoha rosiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Malware rosiana hita ao amin'ny orinasam-pahefana amerikana
Ankafizo miaraka aminay ny premieres amin'ny Netflix amin'ny Janoary 2017
Ireo toerana enina tokony hialanao amin'ireo mikasika ny fiaramanidina mpandeha